Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ireo Londres dia nitarika ny fanarenana ny fitsangatsanganana fialamboly amin'ny taona ho avy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Vaovao mahafaly fa ny mpanjifa any Londres dia toa maniry mafy ny hiala amin'ny taona 2022 - sambatra izy ireo manana seranam-piaramanidina telo mifandray tsara sy tambajotran-dalamby iraisam-pirenena eo am-baravarany mba hahafahan'izy ireo manararaotra tanteraka ny famerenana ny serivisy ho any Eoropa sy any an-dafin'ny, indrindra fa ny fameperana dia mitohy mihena.
Ireo Londres dia mikasa hitarika ny lalana mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny fahavaratra amin'ny fahavaratra 2022, satria maro amin'izy ireo no milaza fa hamandrika fialantsasatra - ary te-hanome vola bebe kokoa amin'ny drafitry ny diany amin'ny taona ho avy, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Tsara kokoa ihany koa izy ireo taorian'ny areti-mifindra noho ny hafa manerana an'i Angletera ary mikasa ny hividy fitsangatsanganana any ivelany tsy hita, hoy ny tatitra nataon'ny WTM Industry.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny 28% amin'ny Londres dia te hanao fialantsasatra iray farafahakeliny amin'ny 2022 - raha oharina amin'ny 22% amin'ny mpanjifa manerana ny firenena. Ankoatr'izay, latsaky ny iray amin'ny 10 (9%) no nilaza fa tsy hamandrika fialan-tsasatra amin'ny 2022 izy ireo, latsaky ny 16% hita manerana ny firenena.
Ny ampahefany dia nilaza fa handany "bebe kokoa" - amin'ny sisin'ny 20% na mihoatra - raha ampitahaina amin'ny 17% manerana ny firenena, ary ny 28% dia nilaza fa handany "bebe kokoa" noho ny teo aloha - hatramin'ny 20% mihoatra - raha oharina amin'ny 25% nasionaly.
Ary koa, ny fanadihadiana dia naneho fa maro kokoa ny Londres toa nivoaka tamin'ny areti-mifindra tamin'ny toerana ara-bola tsara kokoa, satria ny 29% dia nilaza fa tsara kokoa noho ny talohan'ny Covid-19 izy ireo, raha oharina amin'ny salan'isa 19% manerana an'i UK.
Farany, ny fikarohana dia naneho fa ny Londoners dia mazoto mandany ny volany amin'ny fialantsasatra, satria ny roa ampahatelon'izy ireo (66%) dia nilaza fa handany ny volany fanampiny amin'ny fiatoana, raha oharina amin'ny 63% eo ho eo manerana ny firenena.
Ny fikarohana dia tsara ho an'ny fanarenana ny indostrian'ny fitsangatsanganana any ivelany, izay milaza fa misy ny fitakiana mahery vaika ho an'ny fialan-tsasatra aorian'ny areti-mifindra satria mora ny fameperana, miaraka amin'ny fahafahana mitombo bebe kokoa avy amin'ny mpanjifa eto an-drenivohitra.
Izany dia mety ho noho ny safidy malalaka kokoa amin'ny sidina sy ny dia fiarandalamby, satria ny Londoners dia afaka mandeha avy amin'ny foibe iraisam-pirenena telo lehibe - Heathrow, Gatwick ary Stansted - ary ny fiantsonana toa ny St Pancras International ho an'ny serivisy Eurostar.
Ny anton-javatra iray hafa dia ny fiadanam-paharetana ho an'ny seranam-piaramanidina any an-dafin'i London sy atsimo atsinanan'i Angletera, midika izany fa maro ny mpanao fialan-tsasatra any amin'ny faritra no manana safidy vitsy kokoa noho ny talohan'ny valan'aretina.
Ny WTM London, hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny dia, dia atao mandritra ny telo andro manaraka (Alatsinainy 1 - Alarobia 3 Novambra) ao amin'ny ExCeL - London.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana WTM London, dia nilaza hoe: “Vaovao mahafaly fa ny mpanjifa any Londres dia toa maniry mafy ny hiala amin'ny 2022 - sambatra izy ireo manana seranam-piaramanidina telo mifandray tsara sy tambajotran-dalamby iraisam-pirenena eo am-baravarany. araraoty tanteraka amin'ny famerenana ny serivisy mankany Eoropa sy any ivelany, indrindra fa raha mitohy ny famerana ny dia.
"Manantena izahay fa ny famerenana amin'ny laoniny ny tsenan'ny fialamboly dia ahafahan'ny seranam-piaramanidina rezionaly manangana ny tambajotran'izy ireo koa ary ahafahan'ny mpiala sasatra maro manerana an'i UK mamandrika fiatoana any ivelany nefa tsy mila mandeha lavitra loatra amin'ny seranam-piaramanidina hiaingany."